Android Installer Hijacking Attack လုပ်ဆောင်ပုံအကြောင်း | Myanmar Black Hacking
0 Android Installer Hijacking Attack လုပ်ဆောင်ပုံအကြောင်း
မကြာသေးမီက Security Researcher များမှ Android OS နှင့်သက်ဆိုင်သော Vulnerability တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်းမှာ Android OS သုံး Device များတွင် Application များအား Third-party Store များမှ Download ပြုလုပ်ရာတွင် Malicious App များဝင်ရောက်၍ Install ပြုလုပ်သွားနိုင်ပါသည်။ ယင်းအားနည်းချက်ကို အသုံးပြု၍ Attacker များသည် Android Device အား Compromise ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤ Vulnerability ကြောင့် Android User ၄၉.၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆိုးကျိူးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်း တွက်ချက်ထားပါသည်။
Installer Hijacking Attack ဖြစ်ပွားပုံ။
Android OS တွင် Application များကို Install ပြုလုပ်ရာတွင် Official Play Store ဖြစ်သည့် Google Play Store မှ Download ရယူရန် Support လုပ်ထားပါသည်။ Download ရယူသော APK (Android Package) File အား Local File System တွင် သိမ်းပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် Google Play မှ Download ရယူထားသမျှသည် Protected Space ဖြစ်သည့် Internal Storage ထဲတွင်ရောက်ရှိသွားပါသည်။ အကယ်၍ Third Party App Store များမှ APK များအား Download ပြုလုပ်ပါက Unprotected Local Storage ဖြစ်သည့် SD Card ထဲတွင် Install ပြုလုပ်သွားပါသည်။ Google Play Store မှသော်လည်းကောင်း Third Party Play Store မှသော်လည်းကောင်း Download ရယူသော App များအား Package Installer မှ Install ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Installer Hijacking Vulnerability သည် Unprotected Local Storage ထဲတွင် Download ရယူခဲ့သော APK File များကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ Protected Space ထဲရှိ APK File များကိုတော့ ၄င်း Attack ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ထို Download ရရှိထားသော APK File များအား Package Installer မှ Install ပြုလုပ်ရာတွင် “Time to Check” ဆိုသည့် Figure(1) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း User အား Access Permission များတောင်းပါသည်။ User များသည်လည်း Next အား Click ၍ Application များအား Install ပြုလုပ်ပါသည်။ Attacker သည် Background တွင် APK File အား Modify ပြုလုပ်၍သော်လည်းကောင်း Replace ပြုလုပ်၍သော်လည်းကောင်း Installation Process တွင် Hijack ပြုလုပ်၍ Malicious Activity ပြုလုပ်၍ ၄င်း Android Device အား Compromise ပြုလုပ်သွားပါသည်။
Figure(1): User reviews the detail information of app to be installed (i.e. “Time to check”).
Vulnerability ရှိနေသော Android Version များ။
အောက်ဖော်ပြပါ Android Version များတွင် Installer Hijacking Attack ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
• Android 4.0.3 – 4.0.4
• Android 4.1.x
• Android 4.2.x
Installer Hijacking Vulnerability ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း။
မိမိ၏ Android Device သည် ၄င်းအားနည်းချက်ရှိမရှိကို Installer Hijacking Scanner အား Install ပြုလုပ်၍ စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ ၄င်း Apps ၏ Download Link အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Figure(2): Installer Hijacking Scanner
Installer Hijacking Attack အားကာကွယ်ခြင်း။
Installer Hijacking Attack မှကာကွယ်ရန် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Application များကို Google Play Store မှသာ Download ရယူ၍ Install ပြုလုပ်ရန်။
· Android Version 4.4 သို့ System Update ပြုလုပ်ရန်။
· Application များ Install ပြုလုပ်ရာတွင် System Log တစ်ခုဖြစ်သည့် Logcat အား Access လုပ်သည့် Permission အားပိတ်ထားရန်။
· Application များအား Protected Storage Space တွင်သာ Save ရန်။
Labels: Android Hacking . Knowledge . Mobile Hacking